राजा बिरेन्द्रकी छोरी श्रुतीबारे थाहा नभएका यी ४ अ’ चम्मका रह’स्यहरु, कस्ती थीइन उनी ? (हेर्नुहोस भिडियो)
हामी जेठ १५ लाई गणतन्त्र दिवसका रूपमा मनाउँछौं। वैधानिक रूपमा २०६५ जेठ १५ गते नेपालमा गणतन्त्र स्थापनाको घोषणा गरिएको थियो। तर, भावनात्मक रूपमा मेरो लागि २०५८ जेठ १९ को रात नै राजतन्त्र सक्किएको थियो। त्यो कालरात्रि हामी नेपालीहरूका लागि सधैं दुर्भाग्यपूर्ण र दु:खद स्मरण भएर रहेको छ, रहने छ।
त्यस बेला दिवंगत हुनेमा राजा वीरेन्द्र, रानी ऐश्वर्य, युवराज दिपेन्द्र, अधिराजकुमारी श्रुति, अधिराजकुमार निराजन लगायत वीरेन्द्रका दिदीहरू शान्ति सिंह र शारदा शाह, भिनाजु कुमार खड्गविक्रम शाह लगायत दस जना शाही परिवार र नातेदार थिए। दिपेन्द्रले सनकमा पारिवारिक जमघटबीच गोली चलाएर त्यो बि’तण्ड म’च्चाएको मानिन्छ।
यो पनि , कहाँ के गर्दैछन् स्वर्गिय राजा विरेन्द्र शाहका नातिनीहरु ? काठमाडौँ । स्वर्गीय राजा विर विक्रम शाहलाई आज पनि अधिंकाश नेपालीहरुले सम्झिने गरेका छन् । विं स २०५८ साल जेठ १९ गते भएको राजदरबार ह’त्या’का’ण्ड’मा उनी लगायत रानी ऐश्वर्या, युवराज दीपेन्द्र शाह, अधिराजकुमार निराजन र अधिराज कुमारी श्रुती र राजदरबारका अन्य सदस्यहरुको ह’ त्या भएको थियो ।
सन् १९७६ अक्टोबर १५ मा सुन्दर र सुशिल छोरी श्रुतीको जन्म भएको थियो । पहिलो छोरा दिपेन्द्र जन्मेको पाँच वर्षपछि उनको जन्म भएको थियो । त्यसको दुईवर्ष पछि निराजनको जन्म भएको थियो । यसरी रानीको कोखबाट तीन सन्तानको जन्म भएको थियो । छोरी बाल्यकालको पढाई त्रिपुरेश्वरमा रहेको कान्ति इश्वरिय शिशु विद्यालयमा भएको थियो । त्यस्तै उनको स्कुले पढाई काठमाडौँको सेन्ट मेरिज स्कुल हुँदै भारतको अजमेरमा रहेको मायो कलेज गल्र्स स्कुलमा अध्ययन गरिन् । व्याचलरको अध्ययन उनले नेपालको पद्यकन्या स्कुलबाट पुरा गरिन् ।
जब उनी २१ वर्षकी पुगिन्, सन् १९९७ को मे ७ मा उनको विवाह कुमार गोरख शमशेर जंग बहादुर राणासँग भएको थियो ।विवाह भएको पहिलो वर्षमा नै उनले छोरी गिर्वाणी राज्यलक्ष्मीलाई जन्म दिइन् । उक्त दिन राजा विरेन्द्र र रानी ऐश्वर्या हजुरबुबा र हजुरआमा बन्न पुगे । जेठी छोरी जन्मेको ठीक दुई वर्षपछि उनले कान्छी छोरी सुरंगनाको जन्म भएको थियो । विवाह भएर गएपनि उनको र माइती परिवारसँग गहिरो सम्बन्ध थियो । मासिक रुपमा सपरिवार भेट्न हुने गथ्र्यो । तर, कालो दिन बन्यो २०५८ साल जेठ १९ । त्यो दिन एकाएक गो’ली चल्न थाल्यो । राज परिवारको ज्या’ न गयो । दुई छोरीको आमा श्रुती पनि र हिनन् ।
उनलाई उपचारका लागि छाउनी अस्पताल लगिएको थियो । तर, उनलाई चिकित्सकहरुले मृ’ त घो षणा गरे ।विरेन्द्र शाहको परिवारको केही महत्वपुर्ण चिनो छ भने त्यो श्रुतीको कोखबाट जन्मिएका दुई छोरी हुन् । त्यो ह’त्या’का’ण्ड’मा आमा, मामाहरु र हजुरबुबा र हजुरआमा गुमाएका यी दुई छोरीहरु त्यो घटना यता गुमनाम छन् । उनीहरु सञ्चारमाध्यमबाट निकै पर रहेका छन् । सार्वजनिक कार्यक्रममा पनि विरलै देखिन्छन् ।
जेठी छोरी गिर्वाणी यतिखेर २१ वर्षकी पुगिसकेकी छिन् भने कान्छी छोरी सुरगंना १९ वर्षकी पुगिसकेकी छिन् । उनीहरु हाल भारतमा अध्ययरत रहेका छन् । २०६९ सालमा डा खगेन्द्र बहादुर श्रेष्ठले काठमाडौँमा फोटो प्रदर्शनी गरेका थिए । उक्त कार्यक्रमा गिर्वाणी आफ्नो पितासँग देखिएकी थिइन् । उक्त कार्यक्रममा पिता र छोरी दुवैको आँशु थाम्न सकेनन् । थोरै समयको बसाईपछि उनीहरु उक्त कार्यक्रमबाट हिडि हालेका थिए । नेपाल आउँदा उनीहरु महेन्द्र मञ्जिलमा जाने गर्छन् । उक्त मञ्जिलमा पुर्व बडा महारानी रत्ना शाह बस्दै आइरहेकी छिन् । उक्त ठाउँमा उनीहरु रत्नासँग केही समय भने पनि रमाउने गर्छन् ।
प्रकाशित मिति June 8, 2020